5 Cities Ngaphantsi ezixineneyo Ukuze Hlola In France | Gcina A Isitimela
ekhaya > Qeqesha uhambo eFrance > 5 Cities Ngaphantsi ezixineneyo Ukuze Hlola In France
5 Cities Ngaphantsi ezixineneyo Ukuze Hlola In France
yi UHelen Jackson
France popular Bulelani kubakhenkethi hotspot ngokwemizi yalo entle neebhakana ezidume. Ilizwe li indawo yokuphupha odumileyo wonke umhlaba ukuze inkcubeko yayo ubukhalipha ukutya okumnandi. Ngexa abakhenkethi ezininzi umhlambi ku Paris, isixeko amaninzi sixinane kakhulu, ikakhulu ihlobo. Ngethamsanqa, France uye lukhulu ukuba anikele nje Paris kwaye uhlole ezintlanu sezixeko ngaphantsi ephithizelayo ngezantsi.
SaseReims lowo umzi kunye Champagne lo mmandla newayini yaye zombini ngokuphelele langa. It ligcine eminye kakhulu izidiliya abaziwa ehlabathini kunye nabahambi uqiniseke ukuba axhamle emoyeni wayo ezolileyo. Ukuba fan champagne, kwemali kutyelelo kukho unxibelelwano. Lo mmandla yindawo entle kakhulu, kodwa ngaphantsi kakhulu abaninzi ngaphezu ezinkulu lizwe. Ngelixa Champagne, qiniseka ukuba efihlakeleyo ekhokelwa tour uze ufunde kabanzi yenziwa njani champagne.
Metz ku saseReims Uqeqesha
Paris saseReims Uqeqesha
Luxembourg ku saseReims Uqeqesha
Lyon ku saseReims Uqeqesha
Lyon ayikho nje enoxolo iholide oya kuyo kodwa UNESCO World Heritage Site ngenxa amanxuwa ayo odumileyo waseRoma yaye iimyuziyam emangalisa. Ukuba ngaba foodie, Lyon yenye yeendawo ibalaseleyo ukonwabela ezinye kakhulu okumnandi izibiliboco e France, nangona qiniseka ukuba bafune iingcebiso malunga okuhlala unempilo ngexesha uzama ukudla ezintsha kwelinye.
Kwabo banomdla bokwakha, ILyon ikwalikhaya Iicawa ezininzi ze-Renaissance ukuba uza kufumana asasazwa zonke phezu isixeko.
EBrussels ku Lyon Uqeqesha
ILondon ukuya eLyon Highspeed Trains
Marseille ku Lyon Uqeqesha
Amsterdam Lyon Uqeqesha
Ukuba unomdla amakha, Grasse nguye oya ogqibeleleyo. Wakuba Ndiye ndazibonela ezolileyo yayo, ngephambili izitrato, uya kufumana wena ufuna ukubuyela kwakhona. Grasse i indawo ezintle ibekwe ecaleni French Riviera kunye, eyona ndlela ibhetele ahlabe bakule nantsi ukwenza isiFrentshi sakho!!
Idume ngokuba sisixeko sesibini ngobukhulu eFrance, Marseille sisixeko kunye kwimozulu yaselunxwemeni umxhelo. nawe Apha uza kufumana amabhodlo hambo, amazing namaziko ezobugcisa kukushiya ababenalo iiyure. Kwabo bafuna kuthanjiswa, Marseille likhaya esimhlophe mihle apho kuqubha ulwandle ezimnandi. Marseille inika eyona omabini njengoko izaliswe imisebenzi yenkcubeko kwakunye kwiindawo serene ukuba ukhombe.
Montpellier ku Marseille Uqeqesha
Nice ku Marseille Uqeqesha
Paris Marseille Uqeqesha
Lyon ku Marseille Uqeqesha
Ngokufuthi ingqalelo enye zixeko underrated yaseFransi, Lille ngaphantsi abaninzi ngaphezu ezinye French endaweni ethandwa kakhulu kodwa ngokulinganayo enhle. abakhenkethi nga chu ngokusebenzisa iindlela ngokubhijela onwabele nakubugcisa inemibala kwaye ezixinene emoyeni apha endleleni. Ukuze abathandi art, i Palace of Arts Fine Imyuziyam yindawo ekumele uyindwendwele njengoko ilikhaya kuqokelelo lobugcisa lwesibini ngobukhulu eFrance.
Xa utyelela okanye ezibekekeleyo ekubukeni France qiniseka ukuba miss sezixeko ngasentla! Njengoko abaqiniseki ephithizelayo, ihamba phakathi kwabo kuya kuba lula yaye uya kunandipha iimpawu ezikhethekileyo isixeko ngasinye. Enye into le mizi zonke kufuneka babe kwanobuhle kwaye – kanjalo – ukudla emangalisayo, zagcina musa ukulibala, eYurophu abantu ukuqeqesha zokuhamba kunye Gcina A Isitimela.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-less-crowded-cities-to-explore-in-france%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#Ishampeyini #bamba #marseille #traveleurope encane Lyon travelfrance
Ndisebenza njengesikhokelo sokhenketho lwexeshana eKent kunye nebhlog yam malunga namava. Umsebenzi awuthandayo ngempelaveki kukhenketho lokuhambahamba kuNxweme loMzantsi Ntshona weBristol. Ukwangummeli olomeleleyo wendlela yokuphila ezinzileyo kwaye unethemba lokubhala incwadi ngayo ngenye imini. Uhlala nabazali bakhe kunye noFrenchie ogama linguCoco - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Travel Europe